Aysar Yussuf Cabdullaahi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan. Qoraagga ayaa wax ka qoro siyaasadda, arrimaha bulshada, sheeko-faneedyada iyo guud ahaan qeybaha kala duwan ee nolosha. Qoraagga oo arragtidiisa ka yiri “Qalinka waxaan u qaatay si’aan ummaddeyda ugu addeego, oo aan u baro in kaliya aan qori wax lagu bedelin, ee qalin kuba qaran dhisi karo.”
Baraha bulshada oo dhami waa goob ay bulshadu kuwada xiriirto, waana meelaha ugu badan ee waqtiga lagu lumiyo. Horta ma isweydiisay maxaad baraha bulshada u isticmasha, maxaa faa’ido ama daqli kaa soo galo? Waa arrin u baahan inaan isweydiino oo aan marwalba aanu iska indha-tirno, bal eeg: waxaad bixisaa waqti si aad u isticmaasho aalladaha kala duwan sida: facebook, instagram, whatsappka i.w.m, waxaad bixisaa lacag si aad u isticmasho internet-ka, waxaad bixisaa xubin kamida xubnaha jirkada ugu muhiimsan waa indhehe, si aad ugu eegtid waxaad isticmaaleysid, waxaad bixisaa dareenkaga si aad ula socoto allada aad isticmaaleyso intaas oo juhdi iyo …
Bari baa waxa dhacday nin inta la so qafaashay ayaa la keenay qasri ay yaalliin dahab faro badan, lacag iyo dheyman iyo sariiro dahab ka samysan iyo cunto intaba, waxana lagu dhahay ka qaado intaad doonto waxana loo qabtey waqti cayiman kadib ayuu eeg eegey kolba dhinac, kadib waxa uu arkay cunno meeltaal wuxu is yiri malaha waqti baad heysataaye waxaad qaadan rabtidna ma fududee bal u yara dharag. Kadib markii uu dhargay ayaa hurdo qabatay, wuxu is yiri hadana malaha waqti baad heysataaye xooga is kala bixi markii uu indhaha is galiyey isago ku jiifa sariir wada dahaba ayaa …
Waqtigu waa saman uu Alle inoogu nimceeyay, waana wax si dhaqsiya u ordaya oo si degdeg ah inagu dhaafaya oo cid bini’aadmiyana uusan joojin karrin. Qof walbana laga siiyay in cayiman oo xaddeysan qof hori u jiray ha ahaado ama mid hada joogo ama mid iman doono intaba waa kuwa aanan waareynin oo wada tagi doona qofkasta sidduu u dhasho ayuun bu u dhintaa. Sidoo kale dunidu waa mid uu waqtigu rogrogaya, in badan waxaan maqalnaa in dadkii horey ay seexan jireen buuraha hoostoda kuwii ku xigana ay godod qodan jireen kuwii xigana ay dhisan jireen guryo geeda ka sameysan …
Waxaa jiray wiil maskiin ahaa oo agoonimo ku soo korey oo ku noolaa miiga, wuxuu ku shaqeysan jirey qowsaarnimo oo dadka ayuu geela u raaci jiray si uu uga helo masaariiftiisa nolosha waxaana lagu magacaabi jirey Cali. Cali iyo wiilal kale oo saaxiibadiis ah wey is raaci jireen, si ay geela duurka ugu soo wada daajiyaan markii uu geela daaqa billaabo, Cali saaxiibadiis wey iska ciyaari jireen, sida iney bootimeystaan ama ay jar ciyaaran ama iney iska sheekeystaan, Laakiin Cali ma ahay mid waqtigiisa ku lumiya ciyaarahaas ee wuxuu waqtigiisa ku qaadan jirey barashada shiishka falaarta iyo gamuunka/qaansada, wuxuu sameysan …
Noloshu waa mid gaaban waqtiguna waa mid kooban. Haddii aynan waqtigeenna wax macno leh ku qaadanin waxan dareemi doona shalayto iyo isciil kaabin. Waqtigeenna innaanu maal-gashano waxay nagu hoggaamin doontaa horumar iyo harusocod. Waqtigaada maalgasho oo la imaaw wax qabad wanaagsan, waxaad guran doonta miro aad jecleysan doonto, sida nolol qurux badan, lacag iyo saxiibo ku jecel intaba. Daraasad la sameeyey ayaa lagu heley sirta guusha ama maal gashiga ugu wanaagsan ee la sameeya inay tahay, inaad isbarto caadooyin wan-wanaagsan si ay uga mid noqoto caadooyinkagaga caadiga ah, tusaale maalinkasta ayaad wax cabtaa, cunteysaa, hurudaa iyo i.w.m laakiin haddii aad …